चौकिदार खबरदार ! - JagaranPost
Home/राजनीति/चौकिदार खबरदार !
चौकिदार खबरदार !
भारतमा १७ औं लोकसभा चुनावको चर्चा चुलिंदै छ । सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी चुनाव जित्न सबै हतकण्डा प्रयोग गरिरहेको छ भने विपक्षीहरू यसपाला मोदीलाई हराउनै पर्ने भनिरहेका छन् । मोदी २०१४ को चुनावमा चायवालाको रूपमा चर्चामा थिए भने यसपाला चौकीदारको रूपमा चर्चामा आएका छन् । मूल मुद्दा परिदृश्यबाट हराएका छन् । सन २०१४ मा वाचा गरिएका कति मुद्दाहरू पूरा गरियो ? सबैको खातामा १५ लाख रुपियाँ भनिएको थियो । प्रत्येक वर्ष २ करोड रोजगारीको वाचा गरिएको थियो । महिलाहरूलाई सुरक्षाको ग्यारेण्टी भनिएको थियो । सस्तो र सुविधामा तेल उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्ने वाचा गरिएको थियो । भारतभरि १०० वटा स्मार्टसिटी बनाउने भनिएको थियो । गंगा सफाइको वाचा थियो । किसानहरूलाई न्युनतम समर्थन मूल्यको वाचा गरिएको थियो । लोकपाल गठन गर्ने २०१३ मा वील पास गरिएको थियो ।
वाचा गरिएका कुराहरू कति पूरा भए त ? खातामा १५ लाख भनिएकोमा १५ रुपियाँ पनि आएन । दुई करोड रोजगारी ३५ लाखमा सीमित भयो । महिलाहरू सुरक्षित त के मानिसहरू भीडद्वारा मारिन थालिए, कठुवा उन्नाव बलात्कार जस्तो घटना घट्यो । प्रतिपक्षका तीन प्रधानमन्त्रीका प्रत्यासी राहुल गान्धी, मायावती र ममता बनर्जी मध्ये दुई महिला छन् । प्रियंका गान्धी वाड्राको राजनीतिमा सक्रिय प्रवेशले नयाँ तरंग ल्याएको छ । यस्तो वेला भाजपका मानिसहरू महिला विरुद्ध अशोभनीय अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । तेल झन महँगो भयो । घोषणापत्रमा पेट्रोल ४० रुपियाँमा एक लिटर उपलब्ध गराउने भनिएको थियो तर त्यही पैसामा आधी लिटरमात्र आउने भयो । भ्रष्टाचारीहरूलाई जेल हाल्ने भनिएको झेल गरेर विदेश पठाइयो । १०० वटा स्मार्टसिटी भनेकोमा एउटा पनि बनेन । गंगा सफाइ त के गंगा सफाइ अभियन्ता जी.डी. अग्रवाल सहित कतिको गंगा सफाइका लागि ज्यान गयो । किसानहरूको आत्महत्याको दर झन बढ्यो । लोकपाल वील सन १९६८ देखि एक दर्जन पटक संसदमा पेस भयो र अन्ना हजारेको आन्दोलन पछि २०१३ को जनवरीमा मात्र पास भयो तर गठन चाहिँ चुनावको मुखमा भर्खरै यही मार्चमा भयो । पिनाकी चन्द्र घोष ९ सदस्यीय लोकपालको पहिलो अध्यक्ष भए । यीनै कारणहरूले विपक्षीहरू मोदीलाई यसपालाको चुनावमा पराजित गर्न जनतालाई खबरदारी गरिरहेका छन् ।
राप्रपाको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप, २६ भन्दा बढि घाईते
मन्त्रीपरिषद्को निर्णय: पानीजहाज र रेल्वे स्टेशनमा हड्ताल निषेध !
माओ जयन्तीमा प्रचण्डको गर्जन, `प्रधानमन्त्री हुन पार्टि एकता गरिएको हैन, आवश्यक परे फेरि जंगल जान तयार छु´